घरमा कसरी बाह्रैमास ढकमक्क फूलहरु फूलाउने ? | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ ११, २०७८ 5
बिहान उठ्नसाथ ढकमक्क फूलहरु फुलेको देख्दा कस्तो हुँदो हो ? आफुले धेरै समय विताउने घर–आँगनमा रंगबिरंगी फूलहरु हावामा बयेली खेलिरहेको दृश्य कति मनमोहक हुँदो हो ? फूलहरुमा भँमरा वा पुतलीहरु खेलिरहेको देख्दा कति रमाइलो हुँदो हो ?
मौसमी फूलहरु पनि रोप्न सकिन्छ । यसका लागि आफैले बिऊ बिजन राख्न सकिन्छ वा नर्सरीबाट ल्याउन सकिन्छ । तर, कुन सिजनमा कुन फूल रोप्ने भन्ने कुराको भने जानकारी हुनुपर्छ । जाडो, गर्मी, झरी सिजनमा फुल्ने भिन्न भिन्नै प्रकृतिका फूलहरु हुन्छन् । अनलाइनखबर बाट सभार